STELLA AZZURRA NT TIM
1892: Raimundo Irineu Serra (Mestre Irineu) mụrụ.
1920: A mụrụ Sebastião Mota de Melo (Padrinho Sebastião).
1931: Mestre Irineu malitere ọrụ ime mmụọ Santo Daime.
1945: Mestre Irineu guzobere obodo Alto Santo.
1950: Tiziana Vigani mụrụ.
1950: Alfredo Gregório de Melo (Padrinho Alfredo) mụrụ.
1959: Padrinho Sebastião guzobere Colônia Cinco Mil.
1965: Padrinho Sebastião zutere Mestre Irineu ma drankụọ Santo Daime na nke mbụ ya.
1970: Mestre Irineu guzobere CICLU, Centro de Iluminação Cristã Luz Universal.
1971: Mestre Irineu nwụrụ.
1974: Padrinho Sebastião guzobere CEFLURIS (Culto Ecletico da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra).
1975: Walter Menozzi mụrụ.
1980: Tiziana Vigani bi na Colônia Cinco Mil wee nweta ya fardamento.
1983: Padrinho Sebastião guzobere Céu do Mapiá.
1990: Padrinho Sebastião nwụrụ.
1994: Tiziana Vigani malitere ọrụ ime mmụọ Santo Daime na Casa Regina della Pace - Cielo di Assisi.
1998: Menozzi nọrọ mgbanwe ọnwa ụmụ akwụkwọ ọnwa ise na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro; Mahadum Federal nke Rio de Janeiro), wee bịaruo Santo Daime center Céu do Mar nke dị na Floresta da Tijuca.
2000: Menozzi sonyeere otu Assisi.
2000-2001: Menozzi ji ọnwa asaa soro Padrinho Alfredo na ndị obodo ya na-emekọrịta ihe (ọnwa anọ na Céu do Mapiá na ndị ọzọ na obodo ndị ọzọ). Menozzi fardamento mere na Disemba 25, 2000.
2004: A kwụsịrị Menozzi na ọdụ ụgbọ elu Perugia na lita iri abụọ na asaa nke ayahuasca.
2005: E jidere Menozzi na mmadụ iri abụọ ndị ọzọ na Reggio Emilia. Ekpere ikpe na Perugia.
2006: Courtlọ ikpe nke Perugia nakweere arịrịọ maka ịchụpụ ikpe ahụ.
2007: Menozzi guzobere Santo Daime center Stella Azzurra na Reggio Emilia.
2008: CEFLURIS Italia, njikọ nke ụka Santo Daime nke Italiantali (gụnyere Casa Regina della Pace, Stella Azzurra na ndị ọzọ), ka gọọmentị registeredtali debara aha ha n'akwụkwọ.
2009: Courtlọ ikpe Reggio Emilia tọpụrụ Menozzi
2013: Brazil CEFLURIS gbanwere aha ya na ICEFLU, Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal.
2013: ICEFLU Europe hiwere.
2013: Stella Azzurra debara aha ya n'akwụkwọ dị ka Association.
2017: CEFLURIS Italia gbanwere aha ya ka ọ bụrụ ICEFLU.
2019: Casa Regina della Pace ghọrọ ntọala (Fondazione Casa Regina della Pace Onlus).
Stella Azzurra bụ alaka ụlọ ọrụ okpukpe ụwa nke Italy Santo Daime, nke na - eji ihe ọnya entheogenic akpọrọ ayahuasca dị ka sacrament. E hiwere otu a ma Walter Menozzi na-eduzi ya. Akụkọ na mgbanwe abụọ nke Walter Menozzi na nke Stella Azzurra abụwo ihe enyere aka na ọdịbendị na n'ụzọ iwu kwadoro ụzọ maka otu dị iche iche na Italy (na, n'ozuzu ya, na Europe) yana ịkpụzi echiche nke Santo Daime na nke ayahuasca n'etiti ọhaneze Italiantali. Menozzi bụkwa aha ụlọ maka Santo Daime dị iche iche gafee Europe.
Ọtụtụ mmegharị ayahuasca nke oge a sitere na ahụmịhe, akụkọ, na nduzi nke Raimundo Irineu Serra, [Foto dị n'aka nri] nke a na-akpọkarị Mestre (Master) Irineu (1892-1971). Na-arụ ọrụ dị ka onye ọrụ Afro-Brazil seringueiro (onye ọrụ roba) na obodo Brasiléia (na steeti Acre, nke dị na Bolivia), Mestre Irineu mụtara n'aka ndị obodo ahụ banyere ojiji nke ayahuasca. A na-enweta nke a site na decoction nke osisi vaịn (Banisteriopsis caapi, nke a makwaara dị ka jagube ma ọ bụ mariri) na epupụta nke shrub (Psychotria viridis, nke a makwaara dị ka mmiri ma ọ bụ chacruna) na-eto n'ime ọhịa, bụ nke a gwakọtara ọnụ . Ayahuasca rụzuru ọrụ bara uru na nke okpukpe, ebe ọ bụ na o nyere ndị zụrụ ya ume na ọhụụ (mira )es) nke na-ebunye ihe a hụrụ dị ka "amamihe omume." N'otu n'ime ọhụụ dị otú ahụ, Mestre Irineu, onye a zụlitere na Katọlik, bụ mmụọ nwanyị bịakwutere ya, onye ọ kọwara dị ka Rainha da Floresta (Queen of the Forest) na Virgin Mary. Ka oge na-aga, Irineu kwagara Rio Branco (isi obodo Acre), ebe o guzobere otu ụlọ ụka akpọrọ Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU). Ekwuru na ọrụ ime mmụọ mbu mere na 1931 na ụlọ ndị na-eso ụzọ na ụlọ Rio Branco nke Vila Ivonete. Na 1945, gọọmentị kenyere Mestre Irineu otu ala na Alto Santo (Acre), ebe o guzobere obodo Santo Daime, "Alto Santo." Ebu ụzọ jiri aha ahụ mee ihe na nzuzo, na-ezo aka na obodo, ma mechaa kpọọ ya aha ụka Mestre Irineu n'onwe ya. Mestre Irineu ghọrọ onye ama ama dịka onye na-agwọ ọrịa wee sị na ọ na-enweta ukwe ọhụụ n'oge ọhụụ ya, nke ọ webatara n'ememe ayahuasca. N'ime ukwe ndi di otua, okwu di nkpa “dai-me” (“nyem”) putara otutu oge ma were ya n'oru dika aha abuo. ayahuasca na okpukpe n’onwe ya (Santo Daime, ma ọ bụ “Onye dị nsọ nye m.”) Mgbe Mestre Irineu nwụsịrị, Santo Daime bịara banye ọtụtụ ọgbakọ dị iche iche. Nke kachasị mkpa bụ alaka ụlọ ọrụ Brazil, nke onye na-eso ụzọ ya a ma ama, bụ Sebastião Mota de Melo (1920-1990), nke a na-akpọkarị Padrinho, ma ọ bụ "Nna nna," Sebastião). [Foto dị n'aka nri] Padrinho Sebastião maara nke ọma ofufe ime mmụọ nke Allan Kardec (1804-1869). O guzobere obodo ime obodo na Rio Branco (Colônia Cinco Mil, Colony 5000, mgbe ọnụahịa ahụ gasịrị, na cruzeiros, nke ibé ebe e guzobere ya na 1959) mgbe ọ bịarutere Irineu na 1965 wee gwọọ ya, dị ka ọdịnala si dị, nke ụfọdụ ọrịa esophageal. N’afọ 1983, Padrinho Sebastião, onye guzobelarị ụlọ ụka Santo Daime n’obodo ya, kwagara n’oké ọhịa mmiri nke Amazon, bụ ebe o guzobere obodo a na-akpọ Céu do Mapiá (“Eluigwe / Sky nke Mapiá [osimiri]”) na steeti Amazonas. Ejiri otu ya CEFLURIS (Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra). Mgbe Padrinho Sebastião nwụsịrị na 1990, nwa ya nwoke Alfredo Gregório de Melo (b. 1950), nke a na-akpọkarị Padrinho Alfredo, butere ụzọ. Na 1992, CONFEN (Conselho Federal de Entorpecentes, Council of Narcotic Council nke Brazil) kwadoro ndị na-eso ụzọ Santo Daime ka ha jiri ayahuasca n'ememe ha, mgbe ha gara ma mụọ ọtụtụ obodo, gụnyere Céu do Mapiá (Introvigne 2000; Menozzi 2007; Dawson 2013; Introvigne na Zoccatelli 2016).
A mụrụ Walter Menozzi na Reggio Emilia, Northern Italy na 1975. Mgbe ọ gachara liceo scientifico "Lazzaro Spallanzani," ọ gụrụ Economy na Finance na Mahadum Bocconi na Milan, gụsịrị akwụkwọ na 1999. Akwụkwọ edemede ikpeazụ Menozzi na Economy na Ego nwere isiokwu Gli strumenti derivati ​​sulle “commodities” agricole. Il caso dei vini italiani di qualità (Ihe mgbakwasị ụkwụ na ihe eji arụ ọrụ ugbo: Ọnọdụ mmanya ndị Italy toro ogologo `` - Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, November 1, 2016). Ọ na-arụsi ọrụ ike na ngalaba mpaghara nke nyocha na ndu ndu CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - National Corps of Italian Boy Scouts and Girl Guides), Reggio Emilia 1, n'etiti 1987 na 1997, ahụmịhe nwere ike ịkpụzi nzukọ ya. / Nduzi ochichi ya na uche ya doro anya, ma gha amara ya na ndu ndi obodo na ime obodo. Tupu ahụmịhe ya na Santo Daime, Menozzi kọwara onwe ya dị ka "ekweghị na Chineke" (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020).
Menozzi buru ụzọ hụ akụkọ ndị metụtara entheogen n'oge oyi nke 1997 site n'ịgụ akwụkwọ Terence McKenna Ezigbo Ntụrụndụ: Beingbụ Akaụntụ nke Onye Mere Ihe Omume Dịpụrụ adịpụ na Paradaịs Ekwensu (1993). Onye ode akwukwo a nke US, nke nwere mmasi nke ihe ndi ozo na ihe ndi ozo, bu ihe ngbagha. Menozzi na-akọwa na akwụkwọ ahụ metụtara yagé, otu n'ime aha ụmụ amaala ndị ọzọ maka ayahuasca (nke, dị ka okwu ahụ bụ "ayahuasca," na-ezo aka na osisi na ime biya) (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, November 25, 2016). Na 1998, Menozzi, mgbe ọ nọrọ ọnwa ise mgbanwe ụmụ akwụkwọ na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal University of Rio de Janeiro), gakwuuru Santo Daime center Céu do Mar, emi odude ke Floresta da Tijuca ke Rio de Janeiro, ma sonye n'ememe abụọ (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, November 25, 2016).
Ihe dị mkpa maka mgbasa Santo Daime na weretali bụ atụmatụ ndị ọzọ Italiantali ọzọ, Tiziana Vigani (b. 1950), onye na-ese ụkpụrụ ụlọ akwụkwọ gụrụ akwụkwọ nke nọrọ ọnwa asatọ na Colônia Cinco Mil na 1980-1981, bụ ebe ọ zutere Padrinho Sebastião. Otú ọ dị, a kọrọ na Vigani bụ nwa amaala Italiantali nke atọ ị toụ Daime, dịka enyi ya Marina Ruberti na onye ọzọ na-eto eto Italiantali, Adriano Grioni, abanyeworị n'obodo ahụ (ma nọrọ na Brazil, ebe ha nọgidere na-ebi (Menozzi, Nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020) .Ọ dị mkpa ịkọwa na akụkọ ndị dị otú ahụ gbasara mbido mbụ na mmekọrịta nke ụmụ amaala Italiantali na ndị obodo Santo Daime na-ekesa na-ezighi ezi n'etiti ndị na-arụ ọrụ na na rue 2020, Menozzi n'onwe ya, na-adabere na akwụkwọ abụ ndị nwere Ejirila ọtụtụ afọ, dee aha Ruberti dị ka Ruperti (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Mee 30, 2020).
Mgbe ọ laghachiri Italytali, Vigani enweghị njikọ ọ bụla na Colônia, ọ naghịkwa eme Santo Daime afọ iri na atọ ọzọ. Ka oge na-aga, na 1981, ọ kwagara Assisi, ebe o biri ndụ okpukpe, ụdị ndụ Franciscan n'etiti obere ụmụ nwanyị. Na 1994, mgbe Santo Daime malitere ịgbasa na Europe dum, ọ tọrọ ntọala Santo Otu Daime Casa Regina della Pace — Cielo di Assisi (“Home / House of the Queen of Peace — Sky / Heaven of Assisi”) wee maliteghachi ịkpọtụrụ ndị na-eso ụzọ Santo Daime ndị ọzọ. Karịsịa, ọ zutere Padrinho Alfredo [Foto dị n'aka nri] na Spain na 1995. Ọ bụ ezie na mbụ Santo Daime metụtara, ọrụ ime mmụọ na-enweghị isi na Italytali mere na 1990, alaka ụlọ ọrụ tọrọ ntọala na Assisi ghọrọ nke kachasị mkpa Italian Santo Daime center. O nwere ihe dị ka mmadụ iri anọ nọ na 2004, bụ ndị na-agagharị mgbe niile n'etiti Italytali na Brazil. Casa Regina della Pace ka dị adị, gụnyere ihe dị ka mmadụ iri abụọ na iri atọ na-arụkwa ọrụ ebere nke na-enye ndị na-enweghị ebe obibi ebe obibi (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020).
Otu ọzọ, otu kwụụrụ onwe ya na-arụ ọrụ n'otu oge na Genoa. Ndị isi ya abụọ amatala banyere ayahuasca n'adabereghị na ahụmịhe Vigani (ọ bụ ezie na n'otu oge ahụ) ha onwe ha jikọrọ Padrinho Alfredo. Otu a mechara kwaga Ovada (Piedmont) wee kewaa abụọ (Curuchich 2004: 12-13; Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, November 1, 5, na 25, 2016).
Na 2000, Menozzi abanyela na ọrụ ndị otu Italian Assisi, nke, ọ bụ ezie na ọ pere mpe, ndị Katọlik na ndị gọọmentị mara mpaghara ahụ (Menozzi 2011: 1-2; Menozzi 2013: 278, ihe odide ala ala peeji nke 32). N’agbata afọ 2000 na 2001, Menozzi nọrọ ọnwa anọ soro Padrinho Alfredo na ndị obodo ya na Céu do Mapiá na-akpakọrịta, ọnwa atọ ọzọ na obodo Santo Daime ndị ọzọ, gụnyere obodo ọhụrụ mepere emepe nke de Melo bụ Céu do Juruá, na-esote ókèala Peruvian. N'ebe a, Menozzi mere Santo Daime ma rụọ ọrụ n'akụkụ ime obodo na ọnọdụ nke ịdị mfe ma nweta farda ya (lee anya n'okpuru) n'abalị Krismas na 2000 (Menozzi 2013: 23-24).
Mgbe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ na 2005 (lee anya n'okpuru), Menozzi dere otu akwụkwọ aha ya Ayahuasca: La Liana degli Spiriti — il Sacramento magico-religioso dello Sciamanesimo Amazzonico (Ayahuasca: Vine nke Mmụọ — Ime Anwansi-okpukpe Sacramenti nke Amazonian Shamanism). [Foto dị n'aka nri] Franco Angeli editore bu ụzọ bipụta ya na Milan (2007) wee debe ya site na Spazio Interiore na Rome (2013). Edere otutu uzo na uzo nke monograph na nkwupụta nzuzo; agbanyeghị, Menozzi na-edobekarị ụdị onye na-abụghị onye, ​​na-agbasawanye ahụmịhe nke ya na iji onye nke atọ ọbụlagodi na-emetụ nsogbu nke iwu ya aka. Ọzọkwa, ngalaba banyere akụkọ ihe mere eme nke Santo Daime na onwu nke ayahuasca bara ọgaranya na ntụaka maka usoro agụmakwụkwọ na sayensị nke akwụkwọ a nwere ike tozuo oke dị ka mkparịta ụka ndị ọkammụta (ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ndị ọhụụ tụlere) nke bidoro afọ ụfọdụ. monographs ndị ọkà mmụta na Bekee na isiokwu ahụ (enwere ike ịtụle ihe ọzọ dị ka Introvigne 2000). N'ezie, n'oge a na-ede akwụkwọ, enwere ike ịtụle akwụkwọ Menozzi dị ka ezigbo akwụkwọ na Italian na ayahuasca na okpukpe ndị metụtara ayahuasca. A tụgharịbeghị ya na Bekee.
E kere akwụkwọ a ụzọ iri na abụọ. A raara nke mbụ nye, dị ka aha ya gụrụ, na “Botanic Identification of ayahuasca components”. Isi nke abụọ na-ewughachi nkà mmụta ihe ochie na akụkọ ifo nke ayahuasca; ya bụ, ọ lekwasịrị anya n’akụkọ ihe mere eme nke Incas na akụkọ ha banyere osisi na brews dị nsọ. Isiakwụkwọ abụọ na-esonụ na-atụle, n'otu n'otu, ụmụ amaala (ndị Amazon) na nkwenkwe na omume mestizo (ojiji nke osisi dị nsọ na brews site na curanderos na obodo mepere emepe ma ọ bụ obodo mepere emepe n'oge a na oge a). Isi nke ise na-akọwa ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze nke a mụrụ okpukpe nke ayahuasca nke oge a; A na-elekwasị anya na mmetụta nke mmụọ ime mmụọ Kardec. Isi nke isii, nke asaa, na nke asatọ na-ewughachi akụkọ ihe mere eme na ozizi nke, Santo Daime, Barquinha, na União do Vegetal (ndị nke abụọ bụ ndị ọzọ na-adabere na ayahuasca nke malitere na Brazil). Isi nke itoolu na-atụle usoro ọgwụgwọ nke ayahuasca site na ịkọwa ọtụtụ isiokwu sayensị na ndị ọkà mmụta. Isi nke iri nwere nkọwa zuru oke na nkatọ banyere echiche nke "ọgwụ" ahụ. Isi nke 11 metụtara akụkọ ihe mere eme banyere agha iwu gbara gburugburu ayahuasca na mba asaa, gụnyere Italy. Isi nke ikpeazụ chịkọtara ihe ndị e kwuru n'akwụkwọ ahụ ma kwuo ụfọdụ okwu mmechi.
Okwu mmeghe nwere mkparịta ụka dị nkenke banyere nkewa dị n'etiti "ọgwụ, akparamaagwa, na ọnọdụ ime mmụọ nke okpukpe" na ọha mmadụ Western (Menozzi 2013: 18). N'ịdabere na ụfọdụ ihe onye ọka mmụta akparamàgwà mmadụ nke United States Ralph Metzner (1936-2019) kwuru na otu isiokwu 1993 nke isiokwu ya bụ "Ngbasa N'etiti Mmụọ na Ọdịmma na Nzuzu nke Europe," Menozzi kwuru na nkewa n'etiti sayensị na okpukpe nke ndị dị oke mkpa wetara Newton, Galileo, na Descartes, dị mkpa iji gafee oke "nchịkwa" nke "Chọọchị" na "mkpagbu" mana butere ịkparị ahụmịhe nke mmụọ. Ọkpụkpụ dị otú a, dị ka Menozzi si kwuo, enwere ike gwọọ ya site na ịmaliteghachi ọdịnala shamanic (Menozzi 2013, 19-20).
Isi nke mbụ, ma e wezụga ịkọzigharị akụkọ ihe mere eme nke ọmụmụ ayahuasca na ịkọwa ihe ndị dị na Banisteriopsis caapi (nsogbu, harmaline, na tetrahydroharmine: alkaloids a maara dị ka β-Carbolines) na Psychotria viridis (Dimethyltryptamine, ma ọ bụ DMT), na-emesi sayensị abụọ ike. - ihe ndị metụtara ya na-eme oge na ọzọ na monograph ndị ọzọ. Nke mbu, ihe nile di n’ime osisi ndia ekwuru na aru nke aka mmadu. Nke abuo, ihe kpatara hallucinogenic abughi site na oriri nke DMT naanị. Kama nke ahụ, β-Carbolines na-egbochi ụfọdụ enzymes (Monoamine oxidases ma ọ bụ MAO) nke dị na sistem na-edozi ahụ nke ga - eme ka DMT ghara ịgbakwunye; ntụgharị, enzymes na-egbochi ya iru usoro ụjọ nke etiti. Menozzi kwubiri na "Ọ ka bụ nnukwu ihe omimi maka sayensị ka amamihe ụmụ amaala [Amazonian], na-enweghị echiche kemịkalụ na nke ọgwụ, nwere ike iru nsonaazụ dị egwu na ahịhịa ahịhịa dị ka ọgwụ ọgwụ nke ihe ndị mejupụtara ayahuasca" (Menozzi 2013: 28) .
A na-ejikwa ahụ mmadụ emepụta ihe ndị na-emetụta uche nke dị na ayahuasca, na, karịa, ụbụrụ (Menozzi 2013, 195). Mmetụta mmetụta uche na-arụpụta naanị site na ngwakọta nke DMT na β-Carbolines (Menozzi 2013, 195). Nri ayahuasca anaghị eri mmadụ ara; na ntụle, ọ na-arịwanye obere usoro iji nweta otu nsonaazụ (Menozzi 2013: 202). Oriri nke ayahuasca na-eweta nsonaazụ bara uru nke uche, sitere na imeri ọgwụ ọjọọ na mmanya na-aba n'anya na-adị ka onye na-agbaso ụkpụrụ omume (Menozzi 2013: 205,212-21). Iji dị irè, a ga-eri ayahuasca n'ebumnuche ziri ezi, yana nke ziri ezi, ya bụ, na "nhazi na ntọala" ziri ezi (Menozzi 2013: 227-29; Menozzi na-eji okwu Bekee abụọ ahụ). Menozzi na-egosi na ịdị adị nke "adịghị mma", dịka ịgbọ agbọ na afọ ọsịsa (nke atụgharịrị dị ka ngosipụta anụ ahụ nke ime ka mmụọ dị ọcha), pụtara na ndị mmadụ dara mbà n'ụzọ nkịtị site na naanị ihe oriri nke ayahuasca (Menozzi 2013: 134). N'iji otu echiche ndị a, n'isi nke iri, Menozzi na-akọwapụta echiche nke "ọgwụ": ọ na-ajụ nkọwa ya na usoro iwu dabere na ya (na nuce: ọ bụghị ihe niile na-akpata ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na / ma ọ bụ gbanwee ntụgharị uche ka akọwapụtara dịka "Ọgwụ ọjọọ" ma machibidoro ya dịka gọọmentị dị iche iche si kwuo, ikpe a bụ mmanya. Lee, Menozzi 2013: 232). Na mgbakwunye, Menozzi gosipụtara na, ọbụlagodi na anyị kọwaa "ọgwụ" dị ka ihe na-akpata ahụ riri ahụ, na-agbanwe mmụọ, yana n'ozuzu na-ebute mbibi ahụike, ayahuasca erughị eru dị ka ndị a, ọkachasị ma ọ bụrụ na mmadụ echebara oriri ya echiche (Menozzi 2013: 233, 249). Menozzi na-ewere okwu ahụ bụ "hallucinogenic" ka ọ na-eduhie ma, n'agbanyeghị nke a, ọ bụ ihe na-enweghị isi na ayahuasca, nke ọ na-ahọrọ nkọwa dị ka "entheogen," na-ezo aka na ihe "jikọtara otu na akụkụ ime mmụọ ha" (Menozzi 2013) (233).
Menozzi n'onwe ya na-achikota ihe o weere dị ka njirimara kacha pụta ìhè nke oriri ayahuasca na / ma ọ bụ omume Santo Daime n'isi nke ikpeazụ:
Iji nweta ahụmịhe bara uru na ayahuasca, ebumnuche onwe onye (set) bụ isi (Menozzi 2013: 292).
Ọnọdụ okpukpe (ọnọdụ) bụ isi, karịsịa, iji egwu na abụ "na-eme ka mmekọrịta siri ike-ike" (Menozzi 2013: 292).
Ahụmahụ a kapịrị ọnụ enwetara bụ nke a na-ejighị n'aka (Menozzi 2013: 292).
Ahụmahụ ahụ na-arụpụta nchikota nke ahụ, uche, na mmụọ na "edemede" nke mmata nke mmekọrịta miri emi n'etiti ahụike, mmụọ, na ahụike ime mmụọ "(Menozzi 2013: 292).
Ejighị ahụmahụ nke ọnwụ maara ihe (Menozzi 2013: 292-93).
Ahụmahụ ahụ "na-eche eziokwu" ma na-eduga isiokwu ahụ ka ọ mụta ihe ha "maraworị" banyere onwe ha (Menozzi 2013: 293).
Ihe omuma a bu ihe nchoputa na ntanye anya "nchoputa" ma obu nghota nke "ihe omuma zoro ezo" (Menozzi 2013: 293).
Isiokwu ahụ zutere "ụwa ndị ọzọ, nke na-abụghị nke ụwa" (Menozzi 2013: 293).
Ahụmịhe mmụta ahụ abụghị nke usoro, mana ọ na - adị nwayọ nwayọ nwayọ (Menozzi 2013: 293).
Ahụmahụ ahụ n'otu n'otu na mkpokọta n'otu oge (Menozzi 2013: 293-294).
Ahụmịhe ahụ nwere ohere ịnweta onye ọ bụla chọrọ ịnwale ya (Menozzi 2013: 294).
Ayahuasca: La Liana degli Spiriti mechie site na nkenke mkparita uka nke echiche nke ihe. Menozzi kwuru, sị:
Nke a abụghị, ọ pụtaghị na ọ bụ, ikpe na-adịghị mma [nkatọ] nke ọkụ nke ntụgharị uche [“lumi della ragione”]; mesiri ike na nke mbụ]. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ na-eto ihe kpatara nghọta ("ragione illuminante") site na nkatọ nke ọdịda ya na ido onwe ya n'okpuru ebumpụta ụwa nke ọdịnala na mmụọ agbụrụ (Menozzi 2013, 302).
N'otu aka ahụ na Itali ndị ọzọ, jikọrọ ọnụ, yana Santo Da ndị ọzọ ime emmepe n'ụwa niile, Stella Azzurra bụ onye sitere na nkuzi nke Raimundo Irineu Serra, Sebastião Mota de Melo na nwa ya nwoke bụ Alfredo Grégorio de Melo. Ndị otu a na-ekwu na ha na-aga n'ihu nkuzi Mestre Irineu ma na-emeghị ka ndị mmadụ gbanwee. Ọ nakweere Cross nke Caravaca (obe nwere ogwe abụọ kwụ ọtọ) dị ka otu n'ime akara ya ma gosipụta akara ngosi ya na mmụta okpukpe ya na Iso Christianityzọ Kraịst n'ozuzu ya (yana Katọlik karịchaa). [Foto dị n'aka nri] N'ime Njikọ Italiantali, e mesiri onye nsọ Saint Francis nke Assisi ike, na onye nchebe pụrụ iche of Stella Azzurra bụ Saint Michael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi. Stella Azzurra kwekọrọ n'ememe emume mbụ nke Santo Daime (na nke mba ụwa). Ndị chọrọ ịrapara na ntinye na nkwenkwe ahụ na-anabata otu edo (or farda) nke a ga - enye n'oge ememe ma na - akpọ fardados (n'ezie enwere ụdị farda abụọ, nke na - acha anụnụ anụnụ na nke dị larịị na ọcha, "uwe zuru oke", nke a ga - enye n'oge ndị pụrụ iche). Emume nke onye otu na-anata yunifọm ha bụ okued fardamento. Ememe, ma ọ bụ trabalhos espirituais (“ọrụ ime mmụọ”), na-emeghe ndị na-abụghị ndị mmekọ mgbe ha rịọrọ, na-agbaso nyocha nke onye ọ bụla site na fardados nwere ahụmahụ. A na-eme mmemme ndị a oge niile, dịka kalenda akọwapụtara (Curuchich 2003: 14).
N'oge a "ọrụ ime mmụọ" ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ekewa, ha na-anọdụ ala ma ọ bụ na-eguzo na hexagons concentric gburugburu okpokoro, nke a na-etinye Cross nke Caravaca, yana akara ngosi ndị ọzọ na foto nke ndị guzobere. A na-eduzi ememe ndị a site na onye isi ala ma ọ bụ comandante (nwoke ma ọ bụ nwanyị "onye isi ala" ma ọ bụ "ọchịagha"), onye na-anọdụ ma ọ bụ na-eguzo n'akụkụ tebụl ahụ, na-egosipụta oge ndị a ma ama nke ememe ahụ na ịrịọ arịrịọ ma na-eduga abụ nke ukwe, nke yana maracas na ngwa ndị ọzọ. [Foto dị n'aka nri] cerefọdụ emume gụnyere igosipụta ịgba egwu bụ isi; ndị ọzọ na-agụnye ịbụ abụ na-agbanwe na oge ịgbachi nkịtị. Ayahuasca na-elekọta onye ọ bụla site na comandante na ndị na-enyere ha aka (ndị ọzọ nwere ahụmahụ / agadi fardados). Ndi sonyere na ya guzo n’uche ichere oge ha, dika ochichi nke achicha di nso n’oge uka Katoliki. A na-esi na carafe ma ọ bụ kalama wụọ biya n'ime obere iko na ọnụọgụ nke comandante ma ọ bụ onye enyemaka ga-elele onye na-eso ya na mmụọ Daime n'onwe ya. Otu egwuregwu fardados pụrụ iche akpọrọ fiscais (“ndị nche”) kwụụrụ na mpụga iji hụ na a na-asọpụrụ iwu emume, ebe ha na-elebara ọdịmma nke ndị so na ya anya (dịka ọmụmaatụ, inye ha bọket ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbọ agbọ). Ememe nwere ike ịdịru ọtụtụ awa (Curuchich 2003: 10-12).
Ọnọdụ dị iche iche sitere n'ụlọ nke ndị mmadụ gụnyere nke Menozzi ruo, ma ọ dịkarịa ala n'otu oge a kọọrọ na akwụkwọ ndị ọkà mmụta, ụlọ ndị Katọlik na Northern Italy, na-ekwu na nkwenye nke ndị isi Katọlik mpaghara. Ndị nhazi ahụ gwara ndị ọhụụ banyere omume emume ha na-atụ anya ka ha debe na otu esi emeso mmetụta nke ayahuasca. Tupu nnọkọ ahụ, a dụrụ ha ọdụ ka ha zụta uwe ọcha maka emume ahụ ma zere inwe mmekọahụ, na-eri anụ uhie, na-a alcoholụ mmanya na-aba n'anya, na-a drugsụ ọgwụ ọjọọ ụbọchị atọ tupu ụbọchị atọ na nnọkọ ahụ n'onwe ya (Bigliardi 2018). Menozzi kọwara mkpa ọ dị iyi uwe ọcha site n'ikwu na "agba ọ bụla nwere mkpali nke ya, nke na-emetụta ọnọdụ na echiche nke onye so na ya na ndị ọzọ sonyere" (nkwukọrịta nzuzo, November 21, 2016). Tupu oge ahụ e kwuru n’elu na hermitage ahụ, nke sonyere mmadụ iri ise na abụọ, e nyere ha ohere ịzụta ma ọ bụ gbazite otu akwụkwọ nta ahụ nwere abụ ndị a ga-eji mee ihe n’oge “ọrụ” na inye onyinye a na-akọwaghị akọwa na Stella Azzurra. Onyinye ndị ahụ, dị ka a kọwara, ga-ekpuchi, tinyere ihe ndị ọzọ, mmefu maka ịgbazite ọnọdụ ahụ na nri enyere ndị sonyere mgbe emume ahụ gasịrị. Mbipụta nke Menozzi Ayahuasca: La Liana degli Spiriti gosiputara ma ree. A gwara ndị sonyere ka ha jupụta na ajụjụ, nke a jụrụ ha n'ụzọ doro anya ma ha na-ewere ọgwụ mgbochi na / ma ọ bụ na ha nọ n'okpuru ọgwụgwọ maka hyperthyroidism. A machibidoro ndị na-a antụ ọgwụ antidepressants isonye, ​​ebe a dọrọ ndị na-anata ọgwụgwọ maka hyperthyroidism aka na ntị na ọgwụ ha nwere ike igbochi ayahuasca ma nwekwuo mmetụta ya. N'otu ajụjụ a, a gwara ndị sonyere ka ha were ọrụ zuru oke maka nsonye ha na nsonaazụ ọ bụla si na ya (Bigliardi 2018).
Menozzi lụrụ di na nwunye kemgbe 2008 gaa na onye na-eso Santo Daime wee biri n'otu ụlọ obodo na ugwu dị nso na obodo nna ya. O guzobere mkpakọrịta Santo Daime Stella Azzurra na Reggio Emilia na 2007 ọ bụkwa onye ndu ime mmụọ dị ugbu a, onye isi ala na onye nnọchi anya iwu. Ọ na-ejide profaịlụ dị ala, ọkachasị iji gbochie eserese ya na mgbasa ozi na ihe ndị yiri ya. Menozzi, onye na-asụ Portuguese, English, yana ezigbo Spanish, na-asụkarị ọrụe nke "ọrụ ime mmụọ" nke mba na mba ọ na-aga (belụsọ ndị Brazil, ndị ọnụ ọgụgụ dị elu na-esonye), nke nwere ike iru 100-120 kwa afọ (gụnyere ndị Stella Azzurra guzobere, nke dị iri anọ na ise na iri ise kwa afọ) ; Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020).
Dabere na akụkọ nke Menozzi, Stella Azzurra nwere ihe dị ka iri asatọ "ndị otu na-arụsi ọrụ ike," ndị na-esonye na ọrụ ime mmụọ nke otu ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa ma na-enyekwa ego (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020). Menozzi na-akọ na nkezi afọ nke "ndị otu a nọ n'ọrụ" dị n'agbata 30 na 35 (n'etiti ọtụtụ ndị otu afọ), na ndị otu nọkwara n'etiti ndị nwoke na ndị nwanyị. Otutu ndi otu a zulitere dika ndi Katoliki (obu ezie na ha apughi ime ka ndi mmadu mara ya), ma ufodu bu ndi Protestant na ndi Buddha. Ọtụtụ oge, “ọrụ ime mmụọ” onye ụkọchukwu Katọlik sonyere (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020).
Na May 13, 2008, gọọmentị registeredtali debanyere aha CEFLURIS Italia, bụ́ njikọ nke ụka Santo Daime nke Italiantali dị ka “òtù okpukpe n'okpukpe.” Dabere na Menozzi, na May 2009, ihe dịka mmadụ 300-400 nwere mmekọ na Santo Daime centers (Menozzi 2011, 14). CEFLURIS Italia gbanwere aha ya na ICEFLU Italia na 2017. Stella Azzurra bụ otu n'ime ndị guzobere ya na, n'oge a na-ede akwụkwọ, a na-ahụta ya otu kachasị ukwuu. Na mgbakwunye na ịbụ onye nnọchi anya iwu na onye isi ala nke Stella Azzurra, Menozzi bụkwa onye nnọchi anya iwu nke ICEFLU Italia (nke Tiziana Vigani na-eje ozi dị ka onye isi ala na-asọpụrụ).
Kemgbe afọ 2013, Menozzi bụkwa onye otu Board of Directors of ICEFLU Europe, European Confederation of Santo Daime dị iche iche (tọrọ ntọala na 2013) nke gụnyere Stella Azzurra kemgbe mmalite (Walter Menozzi - nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020).
Ntughari aha si CEFLURIS gaa ICEFLU sitere na Brazil. E kpebiri ma mejuputa ya na 2013 site n'aka Padrinho Alfredo Mota de Melo na kansul / ụkpụrụ nkuzi nke Brazil CEFLURIS n'onwe ya. Ihe kpatara ya bu na, na mbu, obodo obula meputara aha ya nke oma site na iji CEFLU (Culto Eclético da Fluente Luz Universal) na-esite na mbido nke otu onye ama ama nke etiti a na-ekwu maka ya dị ka ntụnye aka n'ihe gbasara nkuzi (RIS maka Raimundo Irineu Serra) Otú ọ dị, ka oge na-aga, CEFLURIS ghọrọ aha iwu nke mkpakọrịta nke metụtara ụka nke Céu do Mapiá ebe ụka ndị ọzọ, dịkwa na mpụga Brazil, kere aha ha dịka usoro ahụ anyị kwuburu. Afọ iri atọ ka ntọala Padrinho Alfredo's CEFLURIS gasịrị, e kpebiri akara akara nke ụka ndị a ma mesie njikọ ha ike site na ịnwe akara aha ICEFLU, nke “i” pụtara igreja (“ụka),” ebe ọ na-echekwa CEFLURIS maka nke mbụ etiti / ụka (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Mee 21, 2020).
Edebanyela Stella Azzurra n'akwụkwọ iwu ebe ọ bụ na 2017 dị ka associazione per la promozione sociale ("mkpakọrịta maka ịkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya," ọkachasị ịkwalite ọdịbendị) ma bụrụkwa nzukọ na-abụghị uru. A na-atụ aro onyinye ego, anaghị arịọ (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020). Kemgbe afọ 2018 Stella Azzurra eritela uru site na onyinye afọ ofufo tupu ụtụ isi maka ụlọ ọrụ na-enweghị uru yana mahadum na ụlọ ọrụ sayensị.
Ruo 2019, Menozzi nọ na-arụsi ọrụ ike dịka onye ndụmọdụ ndụmọdụ ego; otu o sila dị, ọ kwupụtara ọkwa mgbanwe ọkachamara (n'agbanyeghị na ekwughị ya) na mbido 2020 (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020).
A họọrọ aha Stella Azzurra na 2008-2009 maka ihe onyonyo na-agagharị (ọ kọwara dị ka "onye isi na-esi n'elu ala nke oké osimiri gbagoro n'ocheeze Chineke") na ahụmịhe metụtara Dao nke Menozzi kemgbe 2001. Menozzi na-ekwusi ike, agbanyeghị , na ihe oyiyi nke “Blue Star” (Estrela Azul na Portuguese) nwekwara ike ịchọta dị ka ihe dị omimi na Santo Daime ukwe metụtara Saint Michael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi na a kpọrọ Estrela d'Água ("Water Star") na a ukwe site na Mestre Irineu. Menozzi n’onwe ya na-atụgharị “Star Water” na “Blue Star” ka ọ na-emechi ọnụ na-ejikọ ọnụ ọgụgụ nke mama Earthwa. Estrela d'Água bụkwa aha obere akwụkwọ abụ nke Menozzi natara (Menozzi, nkwukọrịta okwu nke onwe, Nọvemba 1, 5, 2016). Menozzi malitere ịnata ukwe na 2012 nke Padrinho Alfredo nyefere, ma kwado ya dịka usoro zuru ụwa ọnụ n'etiti ndị na-arụ ọrụ Santo Daime (na okwu ndị ọzọ, ndị isi na ndị ọkachamara na-enweta ukwe n'okpuru nnabata nke ọkwa dị elu / agadi Santo Ndị isi Daime tupu eji ya n'oge emume). Menozzi kwuru na, n'Italytali, ndị otu Stella Azzurra ndị ọzọ mere yana otu Tiziana Vigani na ndị otu Santo Daime ndị ọzọ. Abụọ abụọ nke Menozzi, gụnyere nke mbụ, ka a nabatara na nrọ ma ọ nweghị (ruo ugbu a) anabatara n'oge "ọrụ ime mmụọ". A nabatara ukwe n'ụdị egwu yana nke egwu n'asụsụ Portuguese, ha nwekwara ntụaka maka Jesu, Saint John Baptist, Nne Chukwu na ọdịnala Afro-Brazil. A na-agụkwa ha n’oge “ọrụ mmụọ” nke Stella Azzurra, ọ bụ ezie na e bu ụzọ nye abụ ọma nke Mestre Irineu, Padrinho Sebastião na ndị okenye ndị ọzọ, ndị otu ama ama na Centre na-ewere dị ka ntụnye aka (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020). Ebe ọ bụ na Menozzi enweghị ụkpụrụ na nkuzi na omume, mgbe ọ natara ukwe, ọ na-anọgide na-abụ ya n'uche, na-edetu okwu ndị a, wee mesịa dekọọ ya na ekwentị. Mgbe ụfọdụ a na-agbaso usoro a n'otu ụbọchị dị ka nnabata; n'oge ndị ọzọ, Menozzi na-eche ụbọchị ole na ole tupu ịchekwaa ukwe ahụ, iji jide n'aka na ọ "na-alaghachi" na otu ụda na egwu (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Eprel 8, 2020).
Tolọ ọrụ Santo Daime nke Assisi nyere akwụkwọ ntinye akwụkwọ na June 20, 2003 na Prefecture nke Republic na Perugia, nke e mechara zigara ya na Mịnịstrị nke ime obodo, iji nweta nnabata gọọmentị dị ka "ụlọ ọrụ nke otu ọrụ nzuzo" (okwu ahụ culto na Italiantali anaghị eburu nkọwa na-adịghị mma n'akụkụ a, mana ọ na-ezo aka n'ụzọ iwu na nnọpụiche maka ịkụzi nkwenkwe na omume okpukpe). Ngwa ahụ gụnyere, gụnyere, nkọwa zuru ezu banyere nkwadebe na ngwakọta nke ayahuasca. Menozzi, mgbe ọ lọtara njem na Brazil na 2004, kwụsịrị na ọdụ ụgbọ elu Perugia na lita iri abụọ na asaa nke ayahuasca. Menozzi ekwuola na rue oge ahụ, ebubatala obere ihe ahụ n'totali site na asambodo phytosanitary nke Mịnịsta na-ahụ maka Ọrụ Ugbo na Brazil nyere. Otú ọ dị, n'oge a, n'ihi enweghị nchịkwa nke ọchịchị, enyebeghị akwụkwọ ikike ahụ. Ndị ọrụ kọstọm nke Italy jichiri Santo Daime. Nnyocha kemịkal gosipụtara ọnụnọ nke dimethyltryptamine (DMT), nkewapụtara dị ka ihe nhazi oge nke Mgbakọ United Nations nke Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ihe Ọmụma (1971) (yabụ, e lere anya na ọ nwere ikike dị ike maka mmejọ na enweghị ọgwụgwọ a nabatara). Nnyocha sochiri ya, a wakporo ụlọ ndị Santo Daime n'ọtụtụ obodo Italiantali, na-eduga na obere ihe ọ theụ beingụ a napụrụ. Na February 2005, nwa agbọghọ onye Brazil jidere na Milan ma jichie ayahuasca ya. Ọ bụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị ka enyere ya ohere ịrịọ ikpe, nke mere ka a maa ya ikpe otu afọ na ọkara oge ọhụụ na ikike ịhapụ (tali (Menozzi 2006, 2011). Ọ dị mkpa ịkọwapụta na Mịnịstrị nke ime obodo kpebiri na ha agaghị aga n'ihu na ngwa ahụ e kwuru na mbụ maka nkwado iwu, (dị ka Menozzi mụtara na mbido ọnwa 2004) dabere na iwu na-eyi ọha egwu akwadoro na nsonye nke 9/11 dị ka nke a na-amataghị ụlọ ọrụ iwu kwadoro na thattali nke na-ezo aka na ndị isi dabere na mba ndị ọzọ na Europe (yabụ, ngwa ahụ anwaghị inweta nnabata iwu maka mkpakọrịta Italiantali ọhụrụ, mana maka ngalaba Italy nke ndị otu ndị Brazil) ( Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Mee 30, 2020).
Na Machị 15, 2005, na mgbede, otu ụbọchị tupu ọpụpụ maka njem afọ atọ gaa Mozambique na nnọchite nke Mịnịstrị nke Ofesi nke Italy (ahọpụla ya ka onye isi njikwa nke ngalaba ọrụ ugbo), anwụchiri Menozzi na ala nna obodo na enyo na ọ bụ ụzọ mgbapụ. Mmebi iwu ndị gbara ọkpụrụkpụ bụ mkpakọrịta mkpakọrịta ndị omekome (dịka usoro iwu siri kwuo na “tali "di stampo mafioso," ya bụ, ụdị mafia) maka ịzụ ahịa ọgwụ mba ofesi (ntaramahụhụ site na iri na ise ruo afọ iri atọ n'ụlọ mkpọrọ). Na March 16-17-18, akwụkwọ akụkọ mpaghara Gazzetta di Reggio bipụtara isiokwu na-akọwa Santo Daime dị ka "ịrọ òtù" na "okpukpe adịgboroja" nke ejiri "usoro iwu orgi" ma na-ekwusi ike na ayahuasca, "ọgwụ ọhụrụ," bụ "ihe kachasị ike hallucinogenic" nke mere ka ọ dịkwuo ike inwe mmekọahụ "kamakwa kpatara “mbibi na-adịgide adịgide” nye usoro ụjọ na imeju nke etiti (Gazzetta di Reggio 2005a). N'otu aka ahụ ederede ahịrịokwu ga-eso mgbe ihe omume na-aga (Gazzetta di Reggio 2005b, 2005e, 2005f). E nyere ụfọdụ ohere akwụkwọ akụkọ na nkwupụta nke Tiziana Vigani, onye kwusiri ike na ndị Santo Daime na-arụ ọrụ bụ Ndị Kraịst yana na nzukọ ha na-arụ ọrụ na Brazil n'ọhịa nke azụmahịa na ọrụ ebere. Kaosinadị, otu isiokwu kọwara ayahuasca, nwere ọmarịcha ihe ọmụma dị egwu ma ọ bụrụ na ọ kwekọghị, dị ka “tii adịgboroja-hallucinogenic” (Gazzetta di Reggio 2005c). Akwụkwọ akụkọ ahụ kwukwara okwu banyere ndị ụkọchukwu Katọlik abụọ, nchịkọta nke onye echiche ha nyere isiokwu nke isiokwu ọzọ: “Onye ahụ Abụghị Okpukpe” (Gazzetta di Reggio 2005d). Ka ọ dị ugbu a, mgbe otu izu nke nga gasịrị gasịrị, a jidere Menozzi, ya na ndị na-eso ụzọ Santo Daime ndị ọzọ ejidere na ebubo yiri nke a n'ọtụtụ obodo ndị dị na Italy.
N’abalị anọ n’ọnwa Eprel 4, e kpere ikpe mbụ n’ atlọikpe dị na Perugia. N'okwu Menozzi:
Anyị gosipụtara akwụkwọ zuru oke gbasara akụkụ okpukpe, nke ọchịchị (mba), na sayensị, banyere ọrụ anyị na ebe onyinye anyị na-ezigara kwa afọ na IDA [NGO] Instituto de Desenvolvimento Ihe nkiri - Oflọ Ọrụ Maka Gburugburu Ebe Obibi], gụnyere akwụkwọ ozi nke WWF Brazil nke edere nke ọma maka ndị nnọchi anya Italia na Manaus (Amazonas). Otú ọ dị, arụmụka bụ isi nke ịgbachitere n'akụkụ a bụ banyere eziokwu ahụ bụ na Santo Daime adịghị etinye na ndepụta nke ihe ndị a na-achịkwa [machibidoro iwu] maka iwu Italiantali (Menozzi 2006).
Ka o sina dị, Courtlọikpe ahụ jụrụ ịgbachitere ahụ, na-ekwupụta na: "Santo Daime, ịbụ ngwakọta nke osisi abụọ na ọ bụghị naanị otu, abụghị ngwaahịa sitere n'okike mana a ga-ewere ya dịka nkwadebe ụlọ nyocha […] nwere DMT" (Menozzi 2006) .
Mgbe ahụ, a rịọrọ arịrịọ n'tolọikpe Kasị Elu (Corte di Cassazione) na Rome. A nabatara mkpesa ahụ na Ọktoba 7, 2005. Edere mkpali ederede a na-akwado mkpebi a na Disemba 15. Na nwughari Menozzi:
Isi okwu nke nkwupụta ahụ metụtara etu ọ dị mkpa ka iwu Italiantali ontali banyere ọgwụ wee kọwaa ya banyere otu okwu nke ihe sitere na osisi sitere n'okike nke anaghị achịkwa mana nke nwere alkaloid a na-achịkwa:
Lọikpe Kasị Elu kwupụtara na onye ọka iwu ọha na eze egosighi otu esi kwadebe ayahuasca / Santo Daime;
Ọ bụrụ na ihe ahụ bụ ngwaahịa ụlọ nyocha nwere DMT, ọ kwesịrị ka amachibidoro ya;
Ọ bụrụ na umi ahụ bụ nkwadebe nke sitere na "usoro nnweta dị mfe" nke ihe okike, osisi a na-achịkwaghị achịkwa, ọ dabere na nsonaazụ nkwadebe bụ nsonaazụ nke oriri nke ma osisi abụọ ma ọ bụ na ọ bụghị. Nke a nwere ike tụrụ site alkaloid ukwu na umi na ikwu na ọnụnọ na ma mbụ osisi, akpan akpan;
Ọ bụrụ na umi ọnọde a doro anya "njuputa" nke alkaloids na-akwanyere ndị mbụ osisi na mmetụta na-nnọọ ike na-akwanyere ndị na-rata site na oriri nke ma ndị mbụ osisi, na nke a na nkwadebe na-kwesịrị-achịkwa;
Ọ bụrụ na nkwadebe na-ewepụta ọtụtụ alkaloids (yana mmetụta ya) dị ka oriri nke osisi mbụ, na nke a, anaghị achịkwa nkwadebe ahụ (Menozzi 2006).
Menozzi kọwakwara ụbọchị nke Ọktoba 7 na Disemba 15 dị ka ihe atụ dị ịrịba ama ebe ọ bụ na ha dabara ụbọchị ncheta ụbọchị Padrinho Sebastião na Mestre Irineu, n'otu n'otu (nkwukọrịta nzuzo, Mee 21, 2020).
Na Jenụwarị 13, 2006, agbachitere Menozzi gosipụtara akụkọ sayensị ọhụrụ nke onye Ọkammụta onye Italia bịanyere aka na ya, bụ onye kwuru na Santo Daime bụ “mkpokoro” nke ahịhịa abụọ, “usoro nnweta dị mfe” nke ahịhịa na-ewepụta alkaloids n’ụdị dị ka nke mbụ osisi. N’April 4, 2006, thelọikpe Perugia nakweere arịrịọ a chọrọ ka a kagbuo ya.
A na-etinye lita iri abụọ na asaa nke Santo Daime nke etinyere na 2004 na 2008 yana usoro nke Courtlọikpe Kasị Elu nke ụbọchị Eprel 23, 2008 (kwa ụbọchị a ka Menozzi hụrụ dị ka ihe atụ, dabara na Day of Saint George, onye ọ na-ele anya dị ka otu n'ime ndị nduzi mmụọ ya bụ isi-Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Mee 21, 2020).
Na 2016, a akụkọ na infotainment TV show The hyenas (Jenụwarị 31) kpughere ịdị adị nke ndị otu Italiantali nke a na-elekọta ime biya n'ime usoro na-abụghị nke emume, ebe ebubo ego dị egwu (yabụ, n'etiti 100,00 na 300,00 Euro ma ọ bụ karịa) emere ndị sonyere, ndị ruru site na mgbasa ozi mgbasa ozi. Onye nta akụkọ ahụ sonyere na incognito, ma mesie ike ka a ghara ịgwa ndị sonyere (gụnyere obere ndị na-eto eto, na ụmụaka) banyere mmetụta nke ayahuasca. A kọwara mmetụta dị otú ahụ (gụnyere arrhythmia, nkwarụ, nkwarụ, na mbibi na-adịgide adịgide na akụkụ ahụ) na mkparịta ụka nke dọkịta na-adabere na Poison Center nke Hospitallọ Ọgwụ Niguarda (Milan), na site na ịkọgharị ikpe ọnwụ (na mpụga Italytali) pịa. Agbanyeghi ịkọwapụta na ojiji ayahuasca sitere na ọdịnala shamanic, na na ayahuasca ọ bụghị iwu na mba ụfọdụ, yana agbanyeghị nkwupụta dibia, nke otu “onye omebe iwu” na-akọwaghị ekpebila ịtụle iji okpukpe ya eme ihe dị ka iwepụ nkọwa ya dịka a "ọgwụ," onye nta akụkọ na-akọwakarị ayahuasca dị ka "ọgwụ" wee kpọọ ya "ihe kachasị hallucinogenic n'ụwa" (Ruggeri and Fubini 2016). Nkwupụta ahụ ekwughị ma ọ bụ nọchite anya otu ndị na-eji ayahuasca eme ihe n'okpukpe.
Ndị ọzọ metụtara ikpe gbasara Santo Daime bụ ndị Menozzi na ndị ọzọ so na ICEFLU meriri na 2009, 2010, na 2018. E wezụga okwu ikpe ejidere na ikpe dị ka ndị ahụ anyị kwuru n’elu, n’ime afọ ole na ole gara aga, enwere mkparịta ụka oge ụfọdụ banyere ayahuasca ọha viatali site na akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ n'ịntanetị. Mgbe ụfọdụ, a na-ede akụkọ ndị a n'ụdị agbụrụ na nke nwere obi abụọ (Alì 2015); mgbe ụfọdụ ụda ahụ na-akawanye njọ (Accolla 2008, Turrini 2015). Tụkwasị na nke a, ọ dịkarịa ala otu isiokwu gbalịrị ime ka etiti nkatọ na otuto nke ndị ọkachamara dị iche iche nwere nzere sayensị (Villone 2016) nyere. Otú ọ dị, enweghị ike ịtụle ụdị iberibe a nwere ike iru ọha na eze ka nke nke TV ahụ anyị kwuru na mbụ. The hyenas.
Menozzi na-agba mbọ itinye aka, site na ọrụ ya na atụmatụ ya (gụnyere okwu oge ụfọdụ), iji mepụta echiche dị mma na ịnabata Santo Daime na ayahuasca n'etiti ndị ọha na eze na ụlọ ọrụ Italiantali.
Otu nnukwu ihe ịma aka nye ndị otu Santo Daime na ndị na-arụ ọrụ n'Italytali bụ nke eziokwu ahụ bụ na, ugbu a, ahịhịa nke esi ewepụta ayahuasca akabeghị nke ọma na mba ahụ iji hụ na ezuru oke, tụlee ugboro ole "ọrụ mmụọ" na ọnụ ọgụgụ nke ndị sonyere. Enwere ike ịchọta ọnọdụ ihu igwe dị mma na mpaghara ndịda; agbanyeghị, ịkọ ihe na imepụta ihe buru ibu chọrọ nhazi usoro, ọtụtụ oge, oge buru ibu na ike mmadụ. Na Mee 2020, Menozzi na-akọ na ndị ọrụ Santo Daime nke Italia na-arụ ọrụ na-akọ ọtụtụ osisi; agbanyeghị, ọ na-agbakọ afọ asaa ruo asatọ dịka oge achọrọ iji mepụta Santo Daime na Italy (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Mee 21, 2020). N'ezie, n'ihi ịdị adị nke ọdọ mmiri nke ndị na-azụ ahịa na-agafe karịa ndị ọrụ Santo Daime, mmepụta nke ayahuasca na ala Italiantali nwere ike ịnọchite anya nkwa dị egwu ma ọ bụrụ na ahịa dị egwu maka ndị ọchụnta ego n'okpuruala. Otú ọ dị, ndị Santo Daime enweghị mmasị n'ịzụrụ ayahuasca n'aka ndị ọrụ ubi na ndị na-ereghị ahịa ebe ọ bụ na mmepụta Santo Daime bụ emume okpukpe. Mbubata nke ime biya site na Brazil ma ọ bụ mba mba ọzọ ọ bụla na-ekpughe ndị na-ebu ya nyocha na nnọchite nke ndị na-ahụ maka kọstọm na njirimara nke ihe ahụ dị ka amachibidoro nwere ike ịkpata nsogbu iwu, gụnyere ịtụ mkpọrọ na ikpe. Ebe ọ bụ na usoro iwu Italiantali na-adabere na iwu obodo, ọ gwụla ma otu iwu gbasara ojiji nke entheogens na ọnọdụ okpukpe (ma ọ bụ, karịchaa, ayahuasca na Santo Daime) gafere n'ọkwa ndị omeiwu, nsogbu ndị onye isi Stella Azzurra nwetara nwere ike ịbụ ka onye ọ bụla na-anwa ịgafe ókèala Italiantali na-emeghachi ya mgbe ọ na-ebu ayahuasca, ọ bụ ezie na ndị ikpe na ụlọ ikpe nwere ike ịkọwa ihe ndị dị na mbụ mgbe ha na-eme mkpebi. N'aka ozo, obu ezie na ndi oka iwu nwere ike iji okwu Menozzi na igbapu 2006 gba ndi oka ikpe na ulo ikpe ume ka ha weputa usoro kwesiri ekwesi, ma obu nka bu ihe anahu anya na, n'okpuru onodu ndi ozo, onye obula na ebughari ayahuasca n'ime ala ndi Italia ga-anwu ijide , ịtụ ya mkpọrọ, na ikpe (yana mkpọsa ọjọọ banyere mgbasa ozi). Agbanyeghị, site na mbido Jenụwarị 2020, Menozzi kọrọ na okwu ikpe ise metụtara Stella Azzurra (gụnyere nke ya) bụ nke ọma maka ndị otu ahụ metụtara yana na, n'ime mmadụ ise ahụ, naanị otu ka ebutere n'ụlọ ikpe (Menozzi, nkwukọrịta nzuzo, Jenụwarị 4, 2020).
Image # 1: Raimundo Irineu Serra.
Image # 3: Padrinho Alfredo.
Foto #4: Cover nke Ayahuasca: La Liana degli Spiriti — il Sacramento magico-religioso dello Sciamanesimo Amazzonico (Ayahuasca: Vine nke Mmụọ — Ime Anwansi-okpukpe Sacramenti nke Amazonian Shamanism.
Foto # 5: Obe nke Caravaca.
Foto # 6: Ọrụ Ime Mmụọ na Northern Italy na 2020.
Accolla, Paolino. 2008. “Mio Dio che sballo” [“Chineke m, lee njem” Espresso online, May 27. Nweta site na http://espresso.repubblica.it/visioni/societa/2008/05/27/news/mio-dio-che-sballo-1.8581 na 5 April 2020.
Alị, Maurizio. 2015. "Sciamani del terzo millennio" ["Shamans nke Narị Afọ Iri nke Atọ"] Ajụjụ 20. Nweta site na https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=275977 na 5 April 2020.
Nnukwu, Stefano. 2018. “Santo Daime Nkọwa na :tali: Walter Menozzi, Stella Azzurra, na Conceptualization nke Ayahuasca na Science ” Mgbanwe Ime Mmụọ na Okpukpe 9: 190-219.
Curuchich, T. Cruz Oswaldo. 2003. “Seminario di studio: Chiesa Regina della Pace (Cielo di Assisi)” [Seminar: Churchka Regina della Pace (Cielo di Assisi)] Istituto teologico di Assisi. Biennio di Specializzazione na Teologia Fondamentale. [Akwụkwọ akwụkwọ a na-ebipụtabeghị].
Gazzetta di Reggio. "Sette esoteriche e droga, trentenne arrestato" ["Ndị otu Esotericist na ọgwụ ọjọọ, jidere afọ iri atọ"] Machị 2005. Nweta site na https://ricerca.gelocal.it/gazzettadireggio/archivio/gazzettadireggio/2005/03/17/EC1PO_EC101.html na 5 April 2020.
Gazzetta di Reggio. 2005b. “Droga in bottiglia, arresto lampo a Reggio” [“Bottled Drug, Instant Arrest in Reggio”], Machị 18. Nweta site na http://ricerca.gelocal.it/gazzettadireggio/archivio/gazzettadireggio/2005/03/18/EC1PO_EC101.html na 5 April 2020.
Gazzetta di Reggio. 2005c. “Da Assisi una telefonata alla Gazzetta poco prima che scatassero le manette” [A ekwentị oku si Assisi Short tupu njide] March 19. Nweta site na http://ricerca.gelocal.it/gazzettadireggio/archivio/gazzettadireggio/2005/03/19/EC1PO_EC103.html na 5 April 2020.
Gazzetta di Reggio. 2005d. “'Quella non è una religione'” ['Nke ahụ Abụghị Okpukpe ”], Machị 20 http://ricerca.gelocal.it/gazzettadireggio/archivio/gazzettadireggio/2005/03/20/EL1PO_EL105.html na 5 April 2020.
Gazzetta di Reggio. 2005e. "Droga e sesso, oggi la decisione del gip" ["Ọgwụ na Mmekọahụ: Onyeikpe Na-ekpebi Taa"] March 23. Nweta site na http://ricerca.gelocal.it/gazzettadireggio/archivio/gazzettadireggio/2005/03/23/EC1PO_EC101.html na 5 April 2020.
Gazzetta di Reggio. 2005f. “Santo Daime, nyere gị aka ijide” ”“ “Santo Daime, Onyeikpe nyere ikike ijide ụlọ”] March 24. http://ricerca.gelocal.it/gazzettadireggio/archivio/gazzettadireggio/2005/03/24/EC2PO_EC201.html on 5 April 2020.
Introvigne, Massimo na PierLuigi Zoccatelli. 2016. "Le chiese del Santo Daime" [Chọọchị ndị Santo Daime], Nweta site na http://www.cesnur.com/movimenti-profetici-iniziati-nei-paesi-in-via-di-sviluppo/le-chiese-del-santo-daime/ na 5 April 2020.
Introvigne, Massimo. 2000. “Le Chiese del Santo Daime dal Brasile all’Europa: tra profezia e polizia — Relazione al convegno dell’ALER, Associazione Latino-Americana per lo Studio delle Religioni, Padova, 4 luglio 2000” [Santo Daime Churches si Brazil ruo Europe : N'etiti ¨ Nkọwapụta na ndị uwe ojii - ALER Talk (Latin American Association for Religious Studies), Padua, July 4, 2000]. Nweta site na http://www.cesnur.org/testi/mi_daime2K.htm na 5 April 2020.
Menozzi, Walter. 2013 . Ayahuasca: La Liana degli spiriti — Il sacramento magico-religioso dello sciamanismo amazzonico. Rome: Edizioni Spazio Interiore.
Menozzi, Walter. 2011. "Okwu ikpe Santo Daime na Italy," Pp; 379-88 na International nke Ayahuasca, nke Beatriz Caiuby Labate na Henrik Jungaberle dere. Münster: LIT Verlag.
Menozzi, Walter. 2006. "Italian Santo Daime Juridical Case maliteghachi na ikwu." Nweta site na http://www.bialabate.net/news/italian-santo-daime-juridical-case-resume-and-comment na 5 April 2020.
Ezumike nke Carlino. 2016. “Droga degli sciamani in unacac postale, na-agbaso 4,5 n'arọ dị ka Ayahuasca” [“Ọgwụ Shamans na ngwugwu Ozi, 4.5 Kgs nke Ayahuasca Enweta”], October 5. Nweta site na http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/droga-sciamani-sequestro-ayahuasca-1.2568465 n'April 5 2020.
Ruggeri, Veronica na Marco Fubini. 2016. “Ayahuasca, droga o magia?” [“Ayahuasca, Ọgwụ ma ọ bụ Ime Anwansi?”] Akụkọ nyocha maka mmemme TV The hyenas, January 31. Nweta site na https://www.iene.mediaset.it/video/ruggeri-ayahuasca-droga-o-magia-_69120.shtml na 5 April 2020.
Tempera, Nicoletta. 2016. “Na obodo a dị iri na ise nke iri na ise, ị ga-eche banyere” ““ Liters 15 nke Brew in a Suitcase, ọ bụ ọgwụ ndị Shaman] Ezumike nke Carlino (Bologna) n'ịntanetị. Nweta site na http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/droga-sciamano-aeroporto-arresto-1.2756213 na 5 April 2020.
Turrini, Davide. 2015. "Ayahuasca, la bevanda allucinogena che viene dalle Ande e sta conquistando l'Europa: piace alle star di Hollywood" [Ayahuasca, ndị Hallucinogenic Brew nke na-esite na Andes ma Na-emeri Europe: Hollywood Stars Like It]. Eziokwu Kwa Ụbọchị online, October 1. Nweta site na: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/01/ayahuasca-la-bevanda-allucinogena-che-viene-dalle-ande-e-sta-conquistando-leuropa-piace-alle-star-di-hollywood/2086898/ na 5 April 2020.
Villone, Davide. 2016. "Ayahuasca, proprietà e rischi una sostanza psichedelica" ["Ayahuasca, Ize Ndụ na Njirimara nke a Psychedelic umi"] blog ntinye reblogged na online akwụkwọ akụkọ Eziokwu Kwa Ụbọchị, October 13. Nweta site na http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/13/ayahuasca-una-sostanza-psichedelica-per-aiutarci-a-comprendere-le-nostre-coscienze/3093433/ na 5 April 2020.
Anderson, Brian T. & Beatriz C. Labate, Matthew Meyer, Kenneth W. Tupper, Paulo CR Barbosa, Charles S. Grob, Andrew Dawson, na Dennis McKenna. 2012. "Nkwupụta na ayahuasca." International Journal of Drug Policy 23: 173-75.
Barnard, G. William. 2014. "Entheogens na Okpukpe: Ikpe nke Santo Daime Omenala Okpukpe." Zygon — Akwụkwọ bụ́ Religion and Science 49: 666-84.
Cole ‐ Turner, Ron. 2014. "Entheogens, Mysticism, na Neuroscience." Zygon — Akwụkwọ bụ́ Religion and Science 49: 642-51.
Hummel, Leonard. 2014. “Site Mkpụrụ Ya? Mystical na Visionary nke Consciousness nke ndị Entheogens na-eweta. ” Zygon — Akwụkwọ bụ́ Religion and Science 49: 685-95.
Meyer, Matthew. 2013. “Mmiri, Mmiri, na Ike. Onyinye nke Esotericist Philosophy na mmepe nke okpukpe 'Ayahuasca' nke Brazil. ” Akwụkwọ ewetara na ogbako Psychedelic Science 2013, Oakland, CA, Eprel 18-23.
Richards, William A. 2015. Ihe omuma di omimi: Psychedelics na Okpukpe. New York: Ụlọ ọrụ University Press.
Richards, William A. 2014. "Ebe a na Ugbu a: thechọpụta Ihe Dị Nsọ na Ndị Na-ahụ Anya." Zygon — Akwụkwọ bụ́ Religion and Science 49: 652-65.
Ross, Jennifer. 2012. "Agha maka Iwu na Iwu nke Okpukpe Ayahuasca na Brazil." Ngalaba seminar akwukwo nke akwukwo ihe omuma, Mahadum Western Oregon.
Santo Daime Italia weebụsaịtị. Nweta site na http://www.santodaime.it/ na 5 April 2020.